DANIELA 11 : 21-45 “21 Ary hisy olona famingavinga hitsangana handimby io indray, izay tsy homena ny voninahitry ny fanjakana; fa hiditra tsy ampoizina izy ka hahazo ny fanjakana amin’ny fahafetsena,22 ary ireo miaramila toy ny safotra no hindaosina hiala eo anatrehany sady ho resiny mbamin’ny andriana vita fanekena aminy koa.23 Eny, rehefa mifanaiky aminy io, dia hanao fitaka; fa hiakatra izy ka hahery, na dia vitsy aza ny olona entiny.24 Hiditra tsy ampoizina amin’ny fari-tany mahavokatra indrindra izy ka hanao izay tsy nataon’ny rainy na ny razany; hahahany eny amin’ireny ny sambotra sy ny babo ary ny harena; ary hamoron-tsaina izy ka hamely ny fiarovana mandra-pahalanin’ny fotoana.25 Ary hanaitra ny heriny sy ny fony izy hamely ny mpanjakan’ny atsimo amin’ny miaramila maro; ary ny mpanjakan’ny atsimo kosa hanafika mitondra miaramila maro sady mahery indrindra; nefa tsy hahajanona izy, satria hisy hamoron-tsaina hamely azy.26 Eny, izay homana ny hanina avy aminy ihany no hahalavo azy, ary ny miaramilany hanerana toy ny safotra, sady maro ny faty hiampatrampatra.27 Ary ny fon’ireo mpanjaka roa ireo dia samy ta-hanao ratsy, ary eo an-databatra iray no hiresahany lainga; nefa tsy hambinina izany; fa ny farany dia ho amin’ny fotoana ihany.28 Ary hiverina ho any amin’ny taniny mitondra harena be izy; koa ny fony dia hanohitra ny fanekena masina; ary hahefa sy hiverina ho any amin’ny taniny izy29 Amin’ny fotoana dia ho lasa mianatsimo indray izy; nefa ny farany tsy ho toy ny voalohany;30 fa ny sambon’i Kitima ho avy namely azy, ka dia ho kivy izy ka hiverina ary hisafoaka amin’ny fanekena masina ka hamely; eny, hiverina izy ka hisaina ny amin’ireo efa mahafoy ny fanekena masina.31 Ary hisy miaramila hitsangana noho ny teniny ka handoto ny fitoerana masina, dia ny fiarovana mafy, ary hampitsahatra ny fanatitra isan-andro sady hampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana.32 Ary izay mivadika ny fanekena dia hambosiny amin’ny fandroboana; fa ny olona izay mahalala an’Andriamaniny kosa dia hifikitra amin’izany ka hankatò azy.33 Ary izay hendry ao amin’ny olona dia hampianatra ny maro; nefa ho lavon’ny sabatra sy ny lelafo sy ny famaboana ary ny fandrobana elaela ihany izy.34 Ary rehefa lavo izy, dia hahazo famonjena kely; ary maro no hikambana aminy amin’ny fihatsarambelatsihy.35 Ary hisy ho lavo koa ny manan-tsaina, mba hizahan-toetra sy hanadiovana ary hamotsiana azy ambara-pahatongan’ny andro farany, fa mbola ho amin’ny fotoana ihany izany.36 Ary ny mpanjaka hanao araka izay sitrapony; ary hisandratra sy hanandra-tena ho ambonin’ny andriamanitra rehetra izy ka hiteny zavatra mahagaga ny amin’Andriamanitry ny andriamanitra, ary hambinina ihany izy mandra-pahatanteraky ny fahatezerana; fa izay efa voatendry no tsy maintsy hatao.37 Ary tsy hahoany akory ny andriamanitry ny razany, na ny fitiavan’ny vehivavy; eny, tsy hahoany akory izay andriamanitra, fa hanandra-tena noho izy rehetra izy.38 Fa ny andriamanitry ny fiarovana mafy no hankalazainy hisolo izany; ary volamena sy volafotsy sy vato soa ary zavatra mahafinaritra no ho entiny mankalaza ny andriamanitra izay tsy fantatry ny razany.39 Dia homban’ny andriamani-kafa izy ka hamely ny batery mafy indrindra, ary izay manaiky azy dia homeny voninahitra be sady hataony mpanapaka ny maro, ary hozarainy ho azy ny tany ho valim-pitia.40 Ary amin’ny faran’ny andro dia hanoto azy ny mpanjakan’ny atsimo; ary ny mpanjakan’ny avaratra koa ho avy hamely azy toy ny tafio-drivotra ka hitondra kalesy sy mpitaingin-tsoavaly ary sambo maro; ary hiditra amin’ny tany izy ka hanerana toy ny safotra.41 Hiditra ao amin’ny tany mahafinaritra koa izy, ary maro no ho ripaka; fa izao kosa no ho afa-mandositra ny tànany: Edoma sy Moaba ary ireo lohan’ny taranak’i Amona.42 Haninjitra ny tànany amin’ny tany sasany koa izy; ary ny tany Egypta tsy ho afa-mandositra.43 Fa hahalasa ny rakitra volamena sy volafotsy ary ny zava-tsoan’i Egypta rehetra izy; ary ny Libyana sy ny Etiopiana hanaraka azy.44 Fa hisy siosion-teny avy any atsinanana sy avy any avaratra haharaiki-tahotra azy, ka dia hivoaka amin’ny fahatezerana be izy handrava sy handringana maro.45 Ary haoriny eo anelanelan’ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mahafinaritra ny trano-lainy izay lapany; nefa ho tonga ao amin’ny hiafarany ihany izy, ka tsy hisy hamonjy azy.“
Avy aiza ary ny famonjena? Ireo firenena manodidina aza samy mitady ny tombontsoany: hifamitaka, hifanotrika, ary hifanafika. Hisy ny hafetsena tsy hisian’antra. Toa tsy misy mangirana fa fitaka sy fiketrehana no mifanesisesy.
Tsy misy vidiny ireo zava-panahy (21-31, 37). Ho an’izay tsy mino an’Andriamanitra sy Jesosy Zanany dia tsy misy fotony izany zava-panahy izany. Tsy hasian’izy ireo hajany ny tempoly tao Jerosalema, nozimbazimbana ireo zava-masina. Mampalahelo fa hahazo vahana ireo jiosy izay nankahala ny fivavahana marina. Ho raràna ny fivavahana tao an-tempoly. Tsy nisy fanajana ny andro natokana ho an’Andriamanitra, hisy ny vonoanolona toy ny zaza amam-behivavy. Manginy fotsiny ny fananganana tsangambato ho an’ny sampy. Hisy amin’ireo jiosy aza ho voafitaka amin’ny fanangolena ka hanadino ny maha-izy azy (34).
Fanandratan-tena. Ny fireharehana tamin’ireo izay mpitondra dia hisy valiny avokoa (vakio Matio 24. 15-21). Tsy haharitra ary tsy maintsy hisy farany satria Andriamanitra no tompon’ny teny farany ary hitondra tokoa ny fitsarana Izy.
. Misy ireo mahatoky (33-34). Na dia ao aza ireo manao sarintsarina firahalahiana noho ny tahotra ny fanenjehana, hisy ihany ireo hijoro ho maritioran’ny finoana. Hifikitra amin’Andriamanitra marina na dia handalo sedra mafy aza. Asan’Andriamanitra ho fanadiovana azy ireo anefa izany “ambara-pahatongan’ny andro farany” (35).
Fampaherezana: Mila miambina isika, efa antomotra ny andro. Efa miseho avokoa ireo tranga rehetra ireo.
Maharitra. Raha mbola tsy tonga ny farany, tano mafy ny finoana. Hisy foana ireo fahavalo izay mitady hampihemotra, hanakivy ary hampivily amin’ny finoana an’Andriamanitra Ray sy ny Zanany izay namonjena antsika koa miambena (vakio 1 Jaona 2:18).